သစ်ကြံပိုး: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်သနည်း။ | Linux မှ
သစ်ကြံပိုး: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
သစ်ကြမ်းပိုး ၎င်းသည်လှပပြီးလည်ပတ်မှုရှိသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ငါတို့အကြောင်းကိုမကြာခဏထုတ်ဝေကြဘူးသောအကြောင်း နောက်ဆုံးပို့စ် လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကျော်ကဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်သည်။
၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းကိုပြောသောအခါမှသာပြောသောအချက်ကြောင့်သေချာသည် Linux Mintကပြောသည်ကတည်းက Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဒီနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့သည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအာရုံစိုက်မည် ဒါဟာဘာလဲ? y သင်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။။ သင်တန်း၏လက်ရှိအလေးပေး DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် buster။ ဘယ်လက်ရှိလည်းများအတွက်အခြေခံသည် Distro ပါ MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
၎င်း၏ဖန်တီးသူ (Linux Mint) သည် Cinnamon သည်:
"ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်တည်ဆောက်ထားသောဆန်းသစ်သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောရိုးရာဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည့် Linux desktop တစ်ခု။ Cinnamon သည်အဆင့်မြင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ရိုးရာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုထောက်ပံ့ပေးသော Linux desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ Desktop layout သည် Gnome Shell နည်းပညာ forked နှင့်အတူ Gnome2နှင့်ဆင်တူသည်။ Cinnamon သည်သုံးစွဲသူများကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရလွယ်ကူသော Desktop အတွေ့အကြုံများကိုအိမ်တွင်ခံစားစေသည်။ " GitHub ရှိ Linux Mint site ၏သစ်ကြံပိုးအပိုင်း
အဆိုပါစီမံကိန်းအပေါ် သစ်ကြမ်းပိုး နေ့စွဲအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလ 20 2011 ဒါပေမယ့်လူသိရှင်ကြားကြေညာခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ22012 ၏ blog မှာ Linux Mint။ သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးဗားရှင်းအကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည် Linux Mint 12 "Lisa".
မှ 2.0 ဗားရှင်းသစ်ကြံပိုးခေါက်သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အပြည့်GNOME Shell နှင့် Unity တို့ကဲ့သို့ GNOME အတွက်မျက်နှာစာတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ။
လက်ရှိအဘို့အသွား တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 4.4.2
ကြီးမြတ်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောက်ခံချက် Linux Mint Distro.
ဒါဟာအာရုံစိုက်သည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေ operating system ကိုအကြောင်းကိုအသုံးပြုသူ။
ကမ်းလှမ်းသည် အကောင်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ မြန်နှုန်း, တည်ငြိမ်မှုနှင့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အကြား။
စတင်နေပြီ အဆိုပါ repositories တွင်ပါဝင်သည် များစွာသော Distros ၏။
အလွန် စိတ်ကြိုက်နှင့်ပေါ့ပါးအထူးသဖြင့် Panel နှင့် Desktop အဆင့်တွင်အဆင့်မြင့်ဆက်တင်များနှင့်၎င်းတို့တိုးများလာခြင်းမှတဆင့် themes, applets, desklets နှင့် extension များ.
GNOME3 အပလီကေးရှင်းများနှင့်အပြန်အလှန်သဟဇာတဖြစ်သည် သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသုံးပါလို့ပဲ GTK +.
၎င်းသည်စတင်နေသောသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Windows မှ GNU / Linux သို့ပြောင်းပါ၎င်း၏ interface ကိုသူတို့ကိုတစ်ကမ်းလှမ်းကတည်းက အတော်လေးအကျွမ်းတဝင်လေထုနှင့်အသုံးပြုရန်တကယ်လွယ်ကူသည်.
အများအားဖြင့်တစ် ဦး စားသုံးကြသည် အရင်းအမြစ်များအများအပြား (RAM နှင့် CPU)KDE Plasma နှင့် GNOME တို့ကဲ့သို့ desktop ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်ဆင်တူသည်။
တဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ Optimized ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နဲ့ကွန်ပြူတာကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းတွင်အခြားရွေးချယ်စရာ software အရှိန်မြှင့်တင်မှုစနစ်ပါရှိသည်။
ထိုတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲအရှိန်စစ်ဆင်ရေး ၎င်းသည်များသောအားဖြင့် Virtual Machines ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သော VirtualBox အဖြစ်။
Distro Linux Mint တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
အချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာ။ ရယူနိုင်သနည်း သစ်ကြံပိုးနှင့်ပတ်သက်သည့် themes များ, Applets, Desklets နှင့် extension များသို့မဟုတ်ကြည့်ပါ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်း၊ Distro မှကူးယူခြင်း၊ စီမံကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့များကိုကြည့်ခြင်းအခြားအမှုအရာတို့တွင်။ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည် သစ်ကြမ်းပိုး:
Linux Mint ဘလော့ဂ်
Linux Mint ဖိုရမ်
Linux Mint စီမံကိန်းများ
သစ်ကြံပိုးခွင်ပေါ် Arch Wiki
ရွေးပါ သစ်ကြံပိုးခုံ Desktop ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
မှတ်စု: အပေါ်မှာအခြေခံပြီး Desktop Environment ကိုလည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် သစ်ကြမ်းပိုး အထုပ်အစားထိုးခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံ cinnamon အားဖြင့် cinnamon-core o cinnamon-desktop-environment.
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် သစ်ကြမ်းပိုးတစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် သစ်ကြံပိုး - session ကို Login Manager ကို.
သတိရပါ၊ စတုတ္ထ post အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ပထမအကြောင်းပါ GNOME, လွိုင် KDE Plasma y Xfce. လာမယ့်သူတွေကိုအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ် မိတ်ဖက်, LXDE နှင့်နောက်ဆုံး LXQT ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «Cinnamon», အရာအများအပြားရှိပြီးသားအကြားဖြစ်ပါသည်, ကလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးကြော့နှင့်အရည်တစ်ခုဖြစ်သည် «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » သစ်ကြံပိုး: ၎င်းသည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ထားသနည်း။
Debian နှင့်အတူကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး desktop ဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုအလျင်အမြန်ရရှိနိုင်သောကြောင့် gnome နှင့် KDE သည် ပို၍ စွဲမှတ်စရာကောင်းပြီးပိုမိုပြည့်စုံသော်လည်းနေရာတစ်ခုသို့သွားရန်ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ သစ်ကြံပိုးရိုးရှင်းခြင်း၊ panel ထဲရှိဖြတ်လမ်းများနှင့် conky များကိုထည့်ပါကကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာအားလုံးရှိသည်။
Debian ၏ပြနာမှာ Mint ကဲ့သို့ကောင်းစွာပေါင်းစည်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် RAM ခြေရာကိုတိုးမြှင့်သော package-update ကို - ညွှန်ပြချက်ထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။
MX-Linux တွင်ထည့်သွင်းထားသောဗားရှင်းကဘာလဲ။ Mint တွင်တပ်ဆင်ထားသော "နောက်ဆုံးပေါ်" ဗားရှင်းနှင့် Debian တွင်တပ်ဆင်ထားသော "သမိုင်းမတင်မီ" ဗားရှင်းအကြားမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။
Sebas မင်္ဂလာပါ။ "apt search kinnamon" command မှအောက်ပါသတင်းပို့သည်။ cinnamon / stabil 3.8.8-1 amd64
Chrome 80 ၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုအကြောင်းကြားရန်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အခြားအရာများထည့်သွင်းပါ